Sikandar Raza’s 7-Wicket Magic Places Zimbabwe on Lead
Zimbabwe vs. Sri Lanka
Sikandar Raza pulled off his career-best seven-wicket haul which made Zimbabwe in control of the Harare Test match against Sri Lanka.
Zimbabwe trailed off to an amazing win after scoring 406 runs against Sri Lanka’s 293 runs. Having led the game by 175 runs, the Zimbabwe Cricket team has indeed dominated the game.
One great factor that led the Zimbabwean team towards victory was Sikandar Raza’s impressive seven-wicket haul. Raza’s 7 for 113 had been a great help in bowling out Sri Lanka for 293. The host team was also able to pick out a 113-run lead which later expanded to 175 by the end of the third day of the Test match.
Raza’s 7 for 113 was marked to be the second-best performance that a Zimbabwean player has done on a Test match. With such impressive performance, he ranked second to Paul Strang’s record of 8 for 109 in a match against New Zealand way back in 2000.
The 33-year-old player’s performance definitely made a huge impact on the Zimbabwean cricket fans in Harare that day. However, Zimbabwe was once again forced to make a concussion substitution after opening batsman Kevin Kasuza was struck on the head once more. Despite’s Kasuza’s concussion, the Zimbabwean team finished off with a strong performance against the Sri Lankan team.
The Harare Test match between Zimbabwe and Sri Lanka is set to end on the 31st of January. To know more about Test matches and other cricket formats, head over to Betwala.